Ekoadaoro: Misaona Ny Fahafatesan’Ilay Zirafy Chelito Ny Mponina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Jona 2017 5:41 GMT
(Marihina fa tamin'ny 14 Oktobra 2008 no nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy)
Fanta-daza noho ny karazan-javamananaina maro sy mirehareha amin'ny karazan-javamaniry mahaliana sy biby maro i Ekoadaoro . Na izany aza, misy biby tsy tompotany ao amin'ny firenena iray tena ankafizin'ny olona ao, ary misaona ny fahafatesany vao haingana ny mponina tao Loja. Hita maty teo akaikin'ny valany tao amin'ny Saha Fiarovam-biby ao Loja ilay zirafy antsoina hoe “Chelito” , izay efa niaina tao an-toerana hatramin'ny taona 2003. Chelito no hany zirafy hireharehan'ny mponina amin'ny sokajin-taona rehetra ao Ekoadaoro izay iray amin'ireo faritra fantatra manintona mpizahatany malaza indrindra. Jereo ato ny sariny nataon'i Sur Ecuador [es] ho an'ny afisin'ny fizahan-tany .
Tsy mbola fantatra ny nahatonga ny fahafatesana fa mbola eo am-piandrasana ny vokatry ny fandidiam-paty, kanefa maro no manombantombana fa mety voapoizina ity biby ity. Ny hafa kosa nanome tsiny ny tsy fahatomombanan'ny fitazonana ny biby ao anatin'ny saha fiarovam-biby . Na inona na inona ny antony, malahelo ny mponina maro ao Loja ary maro ny bilaogera tao an-toerana no nahatsiaro ny zavatra niainany tao amin'ny saha fiarovam-biby.
Sary avy amin'i Nelson Piedra , ary nahazoana alalana.
Manana fahatsiarovana mampihetsi-po an'ilay biby [es] i Angel Gualán:
Mahatsiaro ilay biby sariaka amin'ny mpizaha tany isika rehetra, volana vitsy lasa izay nandritra ny diako farany hijery azy, tena sariaka izy ary manatona akaiky mba ahafahan'ny olona manome sakafo sy manafosafo azy.
Mampatsiahy ny lazan'i Chelito tao amin'ny bilaogy Dispatches from the Equator ihany koa ilay bilaogera monina any amin'ny firenen-kafa:
Fony aho tonga tao Loja voalohany hitsidika ny toerana tany am-piandohan'ny volana Septambra dia nolazaina aho fa tokony handeha ho any amin'ny saha fiarovam-biby ao an-toerana hijery ilay zirafy. Toy ny olo-malaza ao an-tanàndehibe mihitsy ilay zirafy, Chelito, ny hany zirafy ao Ekoadaoro ary angamba ny hany biby tsy tompotany ao Ekoadaoro amin'ireo rehetra ao anaty saha. Nandeha aho ary hitako ny ankizy rehetra sy ny olon-dehibe teo ivelan'ny fefy manodidina manome ahitra sy ravin-kazo azy, tena faly izy ireo miaraka amin'ilay biby tena ankafizin'izy ireo ao an-tanàndehibe. Afaka mitsidika tsy tapaka an'i Chelito avokoa ny olona rehetra eto satria 25 cents monja ny saran'ny fidirana ao amin'ny saha fiarovam-biby .
Mbola tsy fantatra izay tompon'andraikitra tamin'ity zava-nitranga ity raha mbola tsy fantatra ny antony nahatonga ny fahafatesany, kanefa niombon-kevitra tamin'ny fanomezan-tsiny sasany ny Sur Ecuador [es] .
Tara loatra ny hanombanana ny fanomezan-tsiny noho ny fahafatesany, kanefa mino aho fa tompon'andraikitra amin'ny fahafatesany avokoa isika rehetra, noho ny namelana azy irery tao anaty vala; noho ny tsy fandraisana fepetra ny amin'ny fikarakarana azy, noho ny fiheverana fa salama izy , satria nanao azy ho toy ny marika fizahantany fotsiny isika mba hangalana sary fa tsy mba nihevitra ny momba azy.
Taorian'ny fahafatesan'ilay biby, nidina an-dalambe ny mponina tao Loja miantso ny governemanta eo an-toerana mba hanome fikarakarana tsara kokoa ny biby ao amin'ny saha fiarovam-biby. Nanoratra mikasika ny fanohanana isankarazany avy amin'ireo nandray anjara tamin'ny diabe ny Voces Lojanas [es] :
Sora-baventy, balaonina mavo sy volondaoranjy, baoritra zirafy, ankizy miakanjo akanjo zirafy, nandeha nitety ny lalamben'ny tanàndehibe ny olona rehetra miaraka amin'ny akanjo ambony misy hafatry ny diabe ka nahafeno lalambe efatra mifampitohy. Mahery ny hafatra : “Aoka Isika Hikarakara ny Saha Fiarovam-biby,” “Hajao ny biby”, “Andeha Hamonjy ny Saha Fiarovam-biby”, ary “Avereno i Chelito .”
Misy dikany lehibe ho an'ny fiainan'ny mponina ao Loja i Chelito na dia toa tsy avy any amin'ny firenena Amerika Atsimo aza ny zirafy toa azy ity. Na izany aza, nalahelo tamin'ny fahafatesany ihany koa ny Café de Chucho [es] izay nanontany hoe ” Nahoana ilay tanàndehibe kely no mila zirafy? “